रबिलाई रिहाईको आवाज उठ्यो ,तर पुडासैनीको बिधुवा पत्नी र परिवारले ले न्याया पाउन पर्छ भनेर आवाज उठेन धिरज उपरकोटी युवा नेता ,, ,रंग दर्पण ,, – Ranga Darpan
रबिलाई रिहाईको आवाज उठ्यो ,तर पुडासैनीको बिधुवा पत्नी र परिवारले ले न्याया पाउन पर्छ भनेर आवाज उठेन धिरज उपरकोटी युवा नेता ,, ,रंग दर्पण ,,
रङ्ग दर्पण सम्वाददाता	 प्रकाशित मिति: Aug 19, 2019
भदौ २ , काठमान्डौ – आज जतातै रविलामिछाने बचाउ भन्ने अभियान चल्दा शोकमा डुबेकी पुडाशैनीको श्रीमती र उनका परिवारलाई न्याय दिनुपर्छ भनेर कोहि कसैले किन अवाज उठाएन । रबि लामिछानेलाई देबत्तो करण गरी भोलि त्यो बच्चालाई आफ्नो बुवा कस्ले कसरी मारो भन्ने जवाफ कस्ले दिन्छ ।
रवि लामिछाने संगै युवराज कंडेल र अस्मिता कार्की पनि पक्राउ परेका छन् तर उनीहरुको रिहाईको लागि कसैले आवाज उठाएन आखिर किन ? के उनीहरु रवि जतिकै चर्चित छैनन् ।
हिजो पनी यो समाजमा धनी मनी सामन्त हरूकै मात्रै कुराहरु सुन्नीनिन्थो ।आज पनि त्यही भयको छ । ठुलाको कुरा सबैले सुन्ने सानाको कुरा कसैले न सुन्ने यो समाज किन सालीकराम पुडासैनीको पछ्य मा उनकी बिधुवा पत्नी र टुहुरा छोरा प्रति न्याए दिलाउनु पर्छ भन्ने पछ्य मा किन नारा जुलुस भयनन ।
तर सोतन्त्रताको नाममा देशमा अराजकता बढ्दै छ । आज जो एउटा इमान्दार पत्रकार सालीकराम पुडासैनी भन्ने उमेरमा आत्महत्या गर्न बाध्य बनाइन्छ र आत्महत्या गर्नु केही मिनेट अगाडि आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरेर रूदै भन्छन ।
म रविलामिछाने सहित अन्य २ जनाको कारणले आत्महत्या गर्दैछु जसले मलाई यो अवस्थामा पुर्याए के प्रहरीले छानबिन गर्न नपाउने हो ?
ति आफुलाई बौद्धिक पढेलेखेका भनाउदाहरू किन रबिलाई फसाउन हुदैन रबि जिन्दावाद भन्दै नारा जुलुस लगाउँदै छन । त्यही भिडले सालीकराम पुडासैनीका परिवारलाई न्याए दे निष्पक्ष छानबिन गर दोषि लाई कार्वाही गर भनेर नारा जुलुस लगाउन किन सकेनन।
आखिर रबि लामिछाने किसान गरिबी मज्दुर कै पछ्य मा बोल्ने भय के रबि एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजनम बाट बोलेर अरूलाई थर्काएर ईमोस्नल प्रस्न गरेर सबैले उनलाई देबत्तो मान्ने जो त्यही टेलिभिजनमा पर्दापछाडी घाम पानी नभनिकन आन्दोलन सबै ठाउँ बाट रिपोट लियर पठाउने पत्रकार सालीकराम पुडासैनी मोर्दा किन चुपचाप बसिरहेको छन ।
के उनी मान्छे हैननर ।अझ बिदेशमा बस्ने नेपालीहरु बढी रबिलाई भगवान ठान्दै पुरै भन्दै छन ।जति पैसा चाईएपनी पठाउछ भनेर पुरै रबि लामिछानेको भजन गाई रहेका छन।
र भन्छन अझै रबिले गरिबी मज्दुर किसानको पछ्य मा काम गरेको छन। एदी त्यस्तै गरिबी मज्दुर किसानको पछ्य मा काम गरेका हुन् भने पनि के रवि दोषी नहुन सक्छन भन्ने आदोलान्को भाव हो ?
,चर्चामा आएको मान्छे र केहि काम राम्रा गर्दैमा कोहि कसैले गल्ति गर्दैन भन्ने हाम्रो मानसिकता हो भने त्यो सरासर झुट हुन आउछ। हामी सबै जन्ता लाई सम्मान ब्याबहार हुन पर्छ, भन्नेमा हामी सबै नेपालीहरू एक छौ ।
उनलाई केही गर्नु पर्दैन ,झैगरी पुरै प्रहरीलाई तथानाम गाली गरी ढुङ्गा मुढा गरेर अबरोध गरि चर्को चर्को रूपमा अराजकता मच्चाउँदै प्रहरीलाई छानबिन गर्न अबरोध गरेर के पत्रकार पुडासैनी उनी यो देशको नागरिक हैनन ।
उनको परिवारले न्याए पाउनु पर्दैन उनको जिबन संगीनी तो अबोध बच्चा लाई न्याए चाईदैन के उनीहरू मानव हैन। हिजो त्यही भिड हो र तिनै पत्रकार रबि लामिछाने निर्मला पन्तको हत्यारा कहीले समातिन्छन।
भनेर कराउने चिच्याउने कस्तो समाज हो यो देशमा राज्य छ, कानुन छ, अदालत प्रहरी प्रसासन छ । के छानबिन गर्नै नपाउने हुन्छ ,के रबि नेपालको सम्बिधान भन्दा माथी छन ?
आखिर रबिलाई केही दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा यत्रो रडाको हिजो यीनै रबि हैन। प्रहरी प्रसासन र अदालत दोषि नभनिकन एउटा राष्ट्रिय टेलिभिजन अन्तर्वार्ता लियर मान्छे लाई सार्बजनिक बेजत गर्ने।
निर्मलाले न्याए पाउनु पर्छ भनेर र्याख र्याखती पार्ने माईक्रो फोनै फुट्ने गरी ईमोस्नल प्रस्न गर्ने । आज तिनै रबिका कारण आफ्नै सहकर्मीले आत्महत्या गर्दा छानबिन गर्न प्रहरी अदालतले केही दिन म्याग्द थपेर अनुसन्धान गर्न नपाउने।
एउटा अदालत र प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। सिस्टमले गरेको छ रबिलाई यत्रो लाज यत्रो सार्बजनिक बेजत भयो। भनेर भनिरहदा हिजो तिमीनै हैन अदालत पनी प्रहरी पनी आफै भयर मान्छे लाई दोषि ठराउने तिम्रो कारणले केहीलाई राहत मिलेको होला।
धेरै मान्छे लाई तिम्रो कारणले डिप्रेसन भयको छ । परिवारलाई त्यो ख्याल गरेका छौ । यो देशमा राज्य छ कानुन छ अदालत प्रहरी प्रसासन छ सरकार छ सबै छ तर कुनै पनी नागरिकलाई कुनै घटनामा मिसीयको सामेल भयको पाएमा प्रहरीले छानबिन गर्ने उसको अधिकार हो ।
शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने काम प्रहरी को हो । हिजो पुर्व गृहमन्त्री हरू मन्त्री हरूपनी गल्ती गरेबापत जेल बसेकै हुन । आज रबि लामिछाने गल्ती गरे बापत जेल बस्न हुदैन भन्ने नेपालको संबिधान मा कतैपनि उलेख गरेको छैन ।
पत्रकारको काम खोज पत्रकार हो । तर सबैलाई थर्काउने दादागिरि गर्ने सबै भन्दा मैही हो देशको ठुलो मान्छे । मेरो मात्र यो योगदान छ। देशमा भन्ने अनि कसरी पत्रकार हुन्छ पुरै बार्गेनिङ गर्दै ठुला बिग हाउस सित अनी पत्रकार ?
उनका समर्थक हरू किन सति जान खोजेका छन । अझैं बिदेशमा बस्ने हरू बडी राष्टबादी र ईमोस्नल प्रस्नले फेसबुक लगाउछन अरु मर्दा न्याए चाईने पुडासैनी मर्दा न्याए न चाईने कस्तो हौ ।
हामी नेपाली छानबिन हुनुपर्छ निस्पक्ष रूपमा नारा जुलुस लगाएर छानबिन गर्न बाट अबरोध नगरौं । भोलि रबि निर्दोष भयर पनी आउन सक्छन।
रविलाई उनकै समितिले साथ दिएन समितिबाट अध्यको राजिनामा ,,
शसस्त्र प्रहरी द्वारा ६० कार्टुन अवैध कुखुराको चल्ला नष्ट ,,